Aragtida Dalxiiska ee New Hawaii waa Is -dilid Dhaqaale, laakiin ma aha pono in "hadalku urto"
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka Jabinta Hawaii » Aragtida Dalxiiska ee New Hawaii waa Is -dilid Dhaqaale, laakiin ma aha in la “hadlo”
Jebinta Wararka Safarka • dhaqanka • Faallo • Wararka Dowladda • Wararka Jabinta Hawaii • News • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka Mareykanka
Aragtida Dalxiiska ee New Hawaii waa Is -dilid Dhaqaale, laakiin ma aha in la “hadlo”
14 min akhris
John De Fries, madaxweynaha iyo agaasimaha maamulka dalxiiska ee Hawaii
Ha iloobin qalalaasaha COVID-19, qor dhimashada COVID iyo tirakoobka Hawaii. Iska ilow dadka dalxiiska yimid oo laba toddobaad ka hor ugu sarreeyey oo hadda jilbaha ku soo laabtay.
Doodda ugu muhiimsan ee Hay'adda Dalxiiska ee Hawaii waa sida loo niyad -jebiyo safarka oo loogu riyoodo hab -nololeedka Hawaii oo aan waarin tobanaan sano. Ma jiraa rabitaan dhimasho dalxiiska gudaha Aloha Gobol?
In kasta oo Guddiyada Dalxiiska ee gobollada badankood ee Mareykanka iyo adduunkuba ay aad ugu baahan yihiin inay helaan hab lagu soo dhoweeyo booqdayaal badan, la joogteeyo warshadaha, Hay'adda Dalxiiska Hawaii waxay u muuqataa inay ka fekereyso qaabab looga niyad -jebin karo waaxdan.
Waxaa laga yaabaa inaysan u muuqan sida Maamulka Dalxiiska Hawaii iagency Wakaaladda Gobolka oo ay maalgeliyaan cashuur -bixiyeyaasha Hawaii oo u xilsaaran caafimaadka iyo dhiirrigelinta warshadaha safarka iyo dalxiiska ee Hawaay.
Dalxiisku waa warshadaha ugu weyn Hawaii. Inta badan 1.6 milyan ee qof ee ku nool Gobolka 50aad ee Mareykanka waxay si toos ah ama si dadban ugu tiirsan yihiin warshadaha booqdaha.
Tan iyo Sebtember 9, 2020, dhammaan isgaarsiintu waxay joogsadeen HTA. 9 -kii Sebtember waxay ahayd maalin Mr. John de Fries wuxuu noqday Maamulaha Hay'adda Dalxiiska ee Hawaii.
Tan iyo Sebtember 9, 2020, ma jirin wax hagitaan ah, ma jiraan bayaanno khuseeya COVID iyo dalxiiska. Malaayiin lacag canshuur bixiyeyaal ah, HTA waxay ku guuldareysatay inay qaadato lahaanshaha dhibaatada iyadoo matalaysa Gobolka Hawaii iyo dadkeeda.
Taleefannada HTA ayaa soo wacayay tan iyo bishii Maarso 2020, iyadoo aysan jirin cid la hadasha. Daabacadan ma awoodin inay waligeed la hadasho Mr. de Fries.
Mr. de Fries ayaan mar qudha ka soo qaybgalin munaasabad saxaafadeed, wuxuu sameeyay hadalo kasta oo caawin lahaa oo dhiiri gelin lahaa dadka soo booqda, marka laga reebo in la sii daayo tirakoobyada iyo in la sameeyo ogeysiisyo si loo niyad jabiyo booqdayaasha.
HTA waxay isu rogtay wakaaladdan masaafada ah oo dadku ku riyoodaan dhaqanka Hawaii, dhulka hooyada, iyo la-dagaallanka dalxiiska xad-dhaafka ah waqtiyada aysan jirin dalxiis.
Ka doodista arrimaha deegaanka, dalxiiska xad-dhaafka ah, Hawaiian hooyo, iyo dalxiiska dhaqanka waa arrimo aad muhiim u ah waqtiyada caadiga ah. Waxaa laga yaabaa in HTA aysan ogaan. Waxaan ku dhex jirnaa xaalad deg -deg ah tii ugu xumayd ee safarka iyo warshadaha dalxiiska ee abid soo maray.
eTurboNews la gaadhay daneeyayaasha Hawaii, oo ay ku jiraan kooxaha hudheellada, makhaayadaha, dukaamada. Faallooyinka, haddii ay jiraan wax ka baxsan diiwaanka. Qofna ma rabin inuu wax sheego. Ha hadlin ur!
Mufi Hannemann ayaa hadda ah Pdegan & Maamulaha guud ee Ururka Hoyga iyo Dalxiiska ee Hawaii. Wuxuu soo noqday duqa 12 -aad ee Magaalada & Degmada Honolulu, oo ah degmada 13 -aad ee ugu weyn Mareykanka. Mudane Hannemann waligiis kuma soo celin wax wicitaanno ah, emayl ama farriimaha warbaahinta bulshada ah tan iyo markii COVID-19 uu billowday
Ha Hadlin Qadhmuun!
Tani waa dariiqa Hawaiian!
Hay'adda Dalxiiska ee Hawaii waxay ahayd mid mashquulsan waxayna ku samaysay guulo waaweyn gudaha Mcalaamada Kuu Home talk.
Waa kan waxa uu Mr. de Fries ka leeyahay Malam Kuu:
La tarjumay, “daryeelida gurigayga aan jeclahay” waxay ii tahay xaqiijin visceral ah aniga ahaan; iyada oo qiraysa awoodda asaasiga ah ee bini -aadamku u dareemaan inay xidid iyo masuul ka yihiin meelihii ay ka yimaadeen ama meelaha ay deggan yihiin oo guryahooda ugu yeeraan.
Iyada oo ay hadda ku habsatay masiibo caalami ah iyo burbur dhaqaale, Hawai'i waxay wajahaysaa caqabado aad u fara badan - oo ay ka mid yihiin, dib u furista warshadeena dalxiiska, xilli welwel aad u weyn oo sii kordhaya laga dareemi karo bulshooyinkayaga maxalliga ah iyo guud ahaan Gobolka.
Iftiinka rajada, si kastaba ha ahaatee, waxaa laga helaa adkeysiga iyo hal -abuurka hoggaamiyeyaasha Hawai'i ee qaybaha dawladda iyo kuwa gaarka loo leeyahayba; oo waxaan si xushmad leh u aqoonsanayaa abtiyaashii, adeeradii, waalidiintii, kūpuna, dhallinyaradii, tababarayaashii, macallimiintii, wasiirradii, iwm-kuwaas oo maalin walba safka hore ka raadinaya xal degdeg ah iyo mid dhexe, qoysaskooda, xaafaddooda, dugsiyada, kaniisadaha, ganacsiyada yaryar, kuwa aan macaash doonka ahayn, iyo shirkadaha. Asal ahaan, ficilladan madaxbannaan ee maalin walba ka dhaca Polihale, Kauaʻi ilaa Kumukahi Point oo ku taal Jasiiradda Hawaiʻi dhammaantood waxay ku jiraan ruuxa iyo nuxurka Mālama Kuʻu Home - maxaa yeelay iyada oo aan loo eegin asalka qowmiyadeed, mabda'a aasaaska u ah “daryeelka guriga aan jeclahay” ayaa ku jira qof ahaanteenna iyo DNA -da wadareedka.
Waddada Hawaiʻi ee dib-u-soo-kabashada dhaqaalaha iyo kor-u-qaadidda fayoobaanta bulshada waxay u baahan doontaa heerar aan horay loo arag oo diirad-saarid ah, iskaashi, iskaashi, isku-dubbarid, iyo hoggaan fulineed oo mideysan dhammaan qeybaha oo dhan.
Nasiib darrose, dooddan muhiimka ah, daraasado si qurux badan loo soo bandhigay, fiidiyowyo gaagaaban, iyo soo bandhigiddu ma xallin doonaan xiisadda dalxiiska ee COVID-19 ee gobolka. Samaqabka dadka deggan, oo ay ku jiraan dad badan oo hoylaawe ah, kiisaska samafalka, iyo kuwa kaleba waxay ku tiirsan yihiin lacagta ay soo saarto warshadaha safarka iyo dalxiiska.
Maamulka Dalxiiska ee Hawaii oo ku Dhawaaqay Dib u Bixinta Kukulu Ola iyo Aloha Barnaamijyada Aina 15 September 2021
Maamulka Dalxiiska ee Hawaii (HTA) ayaa ku dhawaaqay inay dib u bilaabayaan Kukulu Ola iyo Aloha Barnaamijyada Aina iyo soo jeedinta bulshada. HTA waxay soo saartay laba Codsi oo soo jeedin ah (RFPs) si ay u siiso taageero maaliyadeed ururada iyo barnaamijyada aan macaash doonka ahayn ee sii wadi doona dhaqanka Hawaiian isla markaana ilaalin doona khayraadka dabiiciga ah 2022.
HTA waxay u Daabacdaa Qorshaha Maareynta Dalxiiska Ku-saleysan Bulshada ee Oahu, 31 Ogosto 2021
Hay'adda Dalxiiska ee Hawaii (HTA) ayaa daabacday Qorshaha Waxqabadka Maaraynta Maaraynta 2021-2024 ee Oahu (DMAP), hagaha dib-u-dhiska, dib-u-qeexidda iyo dib-u-dejinta jihada dalxiiska ee Oahu. Qorshaha ku salaysan bulshada ayaa qayb ka ah shaqada HTA ee ku wajahan Malama Kuu Home (daryeelka guriga aan jeclahay) iyo dadaallada dardargelinta leh ee socda si loo maareeyo dalxiiska hab dib-u-cusboonaysiin ah.
Badhasaabka Hawaii David Ige ayaa ku boorriyay dadka deggan, booqdayaasha inay safraan safarka aan muhiimka ahayn
Gov. David Ige ayaa maanta ugu baaqay dadka deggan Hawaii iyo booqdayaasha inay dib u dhigaan dhammaan safarada aan muhiimka ahayn ilaa dhammaadka Oktoobar 2021 sababtuna tahay dhawaanahan, dardar-gelinta xaaladaha COVID-19 oo hadda culeys ku haya xarumaha daryeelka caafimaadka gobolka iyo ilaha.
Hay'adda Dalxiiska ee Hawaii (HTA) ayaa maanta ku dhawaaqday inay udub-dhexaad u tahay inay noqoto urur maarayn ku-meel-gaadh ah oo wax-ku-ool ah iyo dallacsiinta laba fuliye oo muhiim ah kuwaas oo gacan ka geysan doona hagidda dadaallada lagu qeexay Qorshaha Istiraatiijiyadeed ee 2020-2025 ee HTA.
Hay'adda Dalxiiska ee Hawaii ayaa ku dhawaaqday Dib -u -habayn xagga Maaraynta Meesha oo ay ku jiraan Laba dallacsiin Fulineed July 26, 2021
HTA waxay si guud u habaysay qaab -dhismeedkeeda iyo hawl -galladeeda si ay u taageerto hadafka Malama Kuu Home (daryeelka guriga aan jeclahay) iyada oo loo marayo mabaadi'da dalxiiska dib -u -soo -nooleynta. HTA waxaa ka go'an inay awood u siiso bulshada inay yeelato cod weyn mustaqbalka dalxiiska, iyadoo xoogga la saarayo soo celinta bay'ada, sii wadidda dhaqanka Hawaii, aqoonsiga dhaqammada badan ee Hawaii, iyo taageeridda natiijooyinka dhaqaale ee mas'uulka ah.
Maamulka Dalxiiska ee Hawaii wuxuu Taageeraa Barnaamij si loo yareeyo Saamaynta Booqdaha ee Dooxada Pololu ee Jasiiradda Hawaii, Luulyo 9, 2021
Dooxada Pololu waa aag haybad iyo taariikh leh oo ku taal Waqooyiga Kohala ee Jasiiradda Hawaii. Dhawaan, waxaa si xawli ah u kordhay dadka soo booqda Pololu Lookout, Trail, iyo xeebta xeebta, waxaana jira baahi isa soo taraysa oo lagu yareynayo saamaynta ay ku yeelanayso bulshada iyo ilaha dabiiciga iyo dhaqanka.
Hay'adda Dalxiiska ee Hawaii waxay ka shaqeyneysaa sidii loo yareyn lahaa Saamaynta Booqdaha Waddada Hana, Luulyo 8, 2021
- Waddada quruxda badan ee Hana, oo si rasmi ah loogu yaqaan Hana Highway, waa mid ka mid ah meelaha ugu sarreeya ee ay xiiseeyaan booqdayaasha Maui, taasoo dhalisay ciriiriga taraafikada oo ay qayb ahaan sababtay baarkin sharci -darro ah iyo dadka lugeynaya oo aan ammaan ahayn oo maraya waddada weyn. Si gacan looga geysto yareynta xaaladda dadka deggan Hana, Maamulka Dalxiiska ee Hawaii (HTA) wuxuu sii wadaa inuu la shaqeeyo mas'uuliyiinta Degmada Maui iyo hay'adaha kale ee gobolka, wuxuuna sidoo kale si xoog leh kula talinayaa dadka soo booqda inay ku biiraan safar ka socda shirkad dalxiis oo la oggol yahay halkii ay keligood gaari kaxeyn lahaayeen ama booqanaya aagag kale oo ku yaal Maui.
Hay'adda Dalxiiska ee Hawaii waxay taageertaa Baahinta Festifaalka Boqortooyada Merrie iyo Pop-Up Makeke, Luulyo 1, 2021
- Maamulka Dalxiiska ee Hawaii (HTA) wuxuu ku faanaa inuu taageero baahinta wararka 58th Bandhigga Boqortooyada Merrie ee Sannadlaha ah iyo Season 3 ee Pop-Up Makeke kaas oo soo bixi doona inta lagu jiro xafladda. Tani waa 11th Sannadkii ay HTA ahayd kafaala -qaadaha Bandhigga Boqortooyada Merrie. Dhaqanka Hawaii waa mid ka mid ah afarta tiir ee HTA Qorshaha Istaraatiijiyadeed ee 2020-2025, kaas oo sidoo kale lagu turjumay Olelo Hawaii.
HTA Waxay Soo Saartaa Natiijooyinka 2021 Sahanka Dareenka Dadka Degaanka, Juun 24,201
Maamulka Dalxiiska ee Hawaii (HTA) ayaa sii daayay natiijooyinkii Sahankii Dareenka Dadka Degenaa ee Guga 2021 intii lagu gudajiray kulankoodii Guddiga Bisha June ee maanta. Baadhitaanka ayaa lagu ogaaday in kasta oo ay dad badani ka welwelsan yihiin kobaca warshadaha booqdayaasha, inta badan dadka deggan Hawaii waxay aaminsan yihiin in dalxiisku u qalmo arrimaha la xiriira warshadaha.
Maamulka Dalxiiska ee Hawaii ayaa Bilaabay Ololaha Malama Hawaii Waxbarshada, Juun 1, 2021
Hawaii waxay ku martiqaadeysaa dadka safarka ah inay la kulmaan Jaziiradaha Hawaii heer aad u qoto dheer iyada oo xoogga la saarayo sidii loola xiriiri lahaa dhaqankeena, dib loogu celin lahaa meesha loo socdo iyo in la xafido mustaqbalka, iyadoo la raacayo dhaqannada caafimaadka ee nabdoon. Taasi waa farriinta ka dambaysa taxane ah cajalado cajaa'ib leh oo waxbarasho ah oo loo ciyaaro martida kahor iyo kadib markay yimaadaan Hawaii. Waxay qayb ka tahay ololaha suuqgeynta Malama Hawaii, oo dhowaan lagu bilaabay iskaashi dhex maray Hay'adda Dalxiiska Hawaii (HTA) iyo Booqdayaasha Hawaii iyo Xafiiska Shirarka (HVCB).
Guddiga Maamulka Dalxiiska ee Hawaii ayaa u xushay George Kam inuu noqdo Guddoomiyaha, Abriil 30,2021
Guddiga Maamulka Hay'adda Dalxiiska ee Hawaii (HTA) ayaa u doortay George Kam inuu noqdo guddoomiyahooda cusub intii uu socday shalay kulanka guddiga billaha ah. Wuxuu hore u soo noqday guddoomiye ku-xigeenkiisa. Kam waa hoggaamiye bulsheed firfircoon oo hore u ahaan jiray fuliyaha warshadaha badda.
“Waxaan ku jirnaa waqti 'huliau' ama isbeddel beddel leh. Tani waa waqtigii aan ku heli lahayn xalal ku wajahan qofka socotada ah ee pono kaas oo isku dheelitira fursadaha dalxiiska iyo caqabadaha ay u soo bandhigto bulshadeena. Dalxiisku wuxuu noqon karaa xoojiye si kor loogu qaado tayada nolosha dhammaan dadka reer Hawaii. Helitaanka dheelitirku waa geeska makiinadda, ballaadhkeeda cawska pili, ”ayuu yidhi Kam. "Waxaan rajeynayaa inaan la shaqeeyo bulshada, hoggaamiyeyaasheena la doortay, kooxda HTA iyo guddiga HTA si loo helo dheelitirkaas."
HTA waxay ka jawaabtaa nooca ugu dambeeyay ee HB862, Abriil 9, 2021
John De Fries, madaxweynaha iyo maamulaha Hay'adda Dalxiiska ee Hawaii (HTA), ayaa soo saaray bayaankan soo socda oo uga jawaabaya Guddiyada Senate-ka Hawaii ee Waddooyinka iyo Means iyo Ganacsiga iyo Ilaalinta Macmiilka ee adeegsiga mindhicirada daqiiqaddii ugu dambeysay oo beddel maneuverka si loo meel mariyo biil ayaa si weyn wax uga beddeleysa sida wakaaladda dalxiiska ee Hawai'i u matali doonto gobolka iyo dadaalkeeda ku aaddan iskaashiga bulshada iyo dib -u -dejinta dalxiiska qaab dib -u -soo -kabasho leh.
HTA Waxay Daabacdaa Qorshaha Maareynta Dalxiiska ee Ku-saleysan Bulshada ee Jasiiradda Hawaii, Abriil 1, 2021
Hay'adda Dalxiiska Hawaii (HTA) ayaa daabacday 2021-2023 Qorshaha Waxqabadka Maaraynta Maaraynta Jasiiradda Hawaii (DMAP). Waxay qayb ka tahay aragtida istiraatiijiyadeed ee HTA iyo dadaallada sii socda ee lagu maamulayo dalxiiska si xilkasnimo leh oo dib -u -cusboonaysiin ah. Waxaa soo saaray dadka deggan Jasiiradda Hawai'i, oo ay iskaashanayaan Degmada Hawaii iyo Xafiiska Booqdayaasha Jasiiradda Hawaii (IHVB). DMAP waxay u adeegtaa hagaha dib -u -dhiska, dib -u -qeexidda iyo dib -u -dejinta jihada dalxiiska ee Jasiiradda Hawaii. Waxay tilmaamaysaa meelaha baahida loo qabo iyo sidoo kale xalka kor loogu qaadayo tayada nolosha dadka deegaanka iyo hagaajinta waayo -aragnimada booqdaha.
HTA waxay Daabacdaa Qorshaha Maareynta Dalxiiska ee Bulshada Ku Salaysan Maui Nui, Maarso 4, 2021
Hay'adda Dalxiiska Hawaii (HTA) ayaa daabacday 2021-2023 Qorshaha Waxqabadka Maaraynta Ujeeddada Maui Nui (DMAP). Waa qeyb ka mid ah himilada istiraatiijiyadeed ee HTA iyo dadaallada sii socoshada ah ee loogu talagalay in lagu maareeyo dalxiiska qaab mas'uuliyad iyo dib u soo nooleyn leh. Waxaa soo saaray dadka deggan Maui, Molokai iyo Lanai, oo ay iskaashi la leeyihiin Gobolka Maui iyo Maui Visitors iyo Convention Bureau (MVCB). DMAP waxay u adeegtaa hage dib-u-dhiska, dib-u-qeexidda iyo dib-u-habeynta jihada dalxiiska saddexda jasiiradood ee ka kooban Maui Nui. Waxay tilmaamaysaa meelaha baahida loo qabo iyo sidoo kale xalka sare loogu qaadayo tayada nolosha dadka deegaanka iyo hagaajinta khibradaha soo booqda.
“Mahad oo dhan waxaa iska leh dadka Lanai, Molokai iyo Maui oo naftooda u huray geeddi -socodka DMAP oo diyaar u ahaa inay wajahaan arrimo adag, oo ay qaataan aragtiyo kala duwan, sahamiyaan fikrado cusub oo aqoonsadaan mudnaanta waxqabad. Hanaanka DMAP wuxuu bixiyaa qaab wada -shaqayneed kaas oo ka -qaybgalayaashu ay ku dhiirrigelinayaan 'malama' - si loo daryeelo, loo kobciyo loona ilaaliyo meelaha iyo caadooyinka ay aadka u jecel yihiin, ”ayuu yiri John De Fries, madaxweynaha HTA
HTA waxay Daabacdaa Qorshaha Maareynta Dalxiiska ee Ku-saleysan Bulshada ee Kauai, Febraayo 5, 2021
Hay'adda Dalxiiska Hawaii (HTA) ayaa daabacday 2021-2023 Kauai Qorshaha Waxqabadka Maaraynta Tageerada (DMAP). Waxay qayb ka tahay aragtida istiraatiijiyadeed ee HTA iyo dadaallada sii socda ee lagu maamulayo dalxiiska si xilkasnimo leh oo dib -u -cusboonaysiin ah. Waxaa soo saaray dadka deggan Kauai, oo ay iskaashanayaan Degmada Kauai iyo Xafiiska Booqdaha Kauai, DMAP waxay u adeegtaa hagaha dib -u -dhiska, dib -u -qeexidda iyo dib -u -dejinta jihada dalxiiska ee Jasiiradda Beerta. Waxay tilmaamaysaa meelaha baahida loo qabo iyo sidoo kale xalka kor loogu qaadayo tayada nolosha dadka deegaanka iyo hagaajinta waayo -aragnimada booqdaha.
Qorshaha beesha ku salaysan wuxuu diiradda saarayaa tallaabooyinka muhiimka ah ee bulshada, warshadaha booqdayaasha iyo qaybaha kale ay lagama maarmaan u yihiin muddo saddex sano ah. Ficilada waxaa abaabulay afarta tiir ee is -dhexgalka ah ee Qorshaha Istiraatiijiyadeed ee HTA - Khayraadka Dabiiciga ah, Dhaqanka Hawaii, Bulshada iyo Suuqgeynta Calaamadda: